काठमाडौं – पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएको छ । ३ महिना अघिसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर रहेको भारतीय अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएका कारण भारतीय अर्थतन्त्र खस्किएको लगायतका प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन् ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, नेपालमा पार्ने असर एवं त्यसबाट जोगिनुपर्ने उपायबारे अर्थविद् एवं योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारी र अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. डिल्लीराज खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित धारणा :-
चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद् एवं योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
विश्वकै अर्थतन्त्र तरल भएको छ । चीन र अमेरिकाबीच व्यापार द्वन्द्व चलिराखेको छ । त्यसले दुईटै अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने देखिएको छ । कतिपय अर्थशास्त्रीले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा आउँदो वर्ष मन्दी आउन सक्छ भनेर भनिराखेका छन् ।
अमेरिकाको इरानसितको प्रतिबन्धको विषय अर्को छ । जापान र दक्षिण कोरियाबीच पनि अलिकति अनमन चलिराखेको छ । उनीहरूबीच समझदारी कम भइराखेको छ । यता बेलायत चाहिँ ब्रेग्जिटबाट विना योजना बाहिर निस्कन खोजिरहेको छ । त्यसमा संसद र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व चलिराखेको छ ।
युरोप पनि आफ्नै खालको समस्यामा परिराखेको छ । यसकारणले विश्व अर्थतन्त्र तरल भएको छ । यसमा अनिश्चितता बढेको छ । फलस्वरुप शेयर मार्केट अस्थिर भएको छ । तेलको भाउ कहिले तल जान्छ, कहिले माथि जान्छ ।
विश्वमा डलरप्रति मानिसको आकर्षण बढेको छ । सुनप्रति आकर्षण बढेको छ । डलर र सुनप्रति आकर्षण हुँदाखेरी केही लगानीकर्ता भारतबाट अमेरिका फर्केका पनि छन् । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले व्याजदर घटाइदिएको छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिले अलिकति बलियो देखिएको छ तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको अस्थिर नीति र अरुसँग समन्वय नराख्ने खालको नीतिले गर्दा त्यहाँ पनि भोलि लगानीकर्ता भड्किने स्थिति देखिएको छ । त्यसकारणले अमेरिकामा पनि अस्थिरता आउँछ कि, मन्दी आउँछ कि भन्ने आशंका अहिले सिर्जना भएको छ ।
भारतमा हिजोको जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) लागू हुँदादेखिकै विषय छ । अर्को मुद्राको विमुद्रीकरण (डिमोनिटाइजेसन) गरेको विषय छ । अमेरिकामा करको दर घटेको, केन्द्रीय बैंकले व्याजदर घटाइदिएको कारण, अमेरिकी डलर बलियो भएको कारणले गर्दा भारतको अर्थतन्त्रमा त्यसको असर परेको छ ।
भारतमा खासगरी अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा खरिद दर कम भएर गएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा पनि खरिद कम भएर गएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो ३ महिनामा गएर ५ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसअघि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । यो विश्व अर्थराजनीतिमा अस्थिरता हो । हङकङमा पनि अस्थिरता छ ।
यी सबै कारणले गर्दा विश्वमा आर्थिक विषय पनि प्रभावित भएको छ । विश्वमै अर्थतन्त्र प्रभावित भएका कारणले विश्वमै माग कम हुने सम्भावना छ । भारतमा पनि त्यसको केही संकेत देखा परेको छ । अमेरिकामा पनि त्यो देखिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा यसको असर परिसक्यो । अंग्रेजी डलर बढ्नासाथ सुनको भाउ पनि बढेको देखिएकै छ । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर, भारतीय मुद्रा कमजोर भयो, अमेरिकन डलर बलियो भयो, नेपालमा अमेरिकी डलर १ सय १५ करीब पुगिसक्यो । त्यसको असर स्वरुप नेपालका योजना पनि प्रभावित हुन्छन् । नेपाली उपभोक्ता पनि प्रभावित हुन्छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबाट जोगिन नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै मुख्य समाधान हो । आन्तरिक उत्पादन बढायो भने एउटा डलर बलियो भएको बेलामा निकासी बढ्न सक्छ र अर्को आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने व्यापार घाटा कम भएर जान्छ ।
त्यसकारणले गर्दा खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने पट्टि लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यो गर्‍यो भने केही राहत हुन सक्छ । उत्पादन बढाउने कुरा दीर्घकालीन विषय होइन, तत्कालीन रुपमा पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । २–४ महिनामै पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
जस्तैः तरकारी नै वार्षिक रुपमा धेरै आयात भइराखेको छ । उत्पादन त कुनै ३ महिनामै उत्पादन गर्न सकिएला, कुनै ६ महिनामा उत्पादन गर्न सकिएला, कुनै १ वर्षमै पनि गर्न सकिएला । सिमेन्टको उत्पादन बढाउन सकियो, औषधिको उत्पादन बढाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । १–२ महिनामै उत्पादन बढाउन सकिने कुरा पनि त छन् तर रणनीतिक हिसाबले कुन कहिलेसम्म बढाउन सकिन्छ भनेर त्यहीँ अनुसार हिँड्नुपर्‍यो ।
प्राध्यापक डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको समस्याबारे बाहिर धेरै कुरा आई नै सकेका छन् । मूलरुपमा विमुद्रीकरण र जीएसटी लागू हुनु नै हुन् । बैंकमा भएको लेनदेनको कारणले ‘रियल सेक्टर’ खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्र र अटो इन्डस्ट्रीदेखि लिएर कन्सट्रक्सनजस्ता धेरै कुरामा असर पार्‍यो ।
भारतीय बजेटमा गरिएका बजेटका व्यवस्थाले पनि केही असर पार्‍यो । यद्यपि अहिले बजेटका व्यवस्था हटाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
चीन र अमेरिकाबीच व्यापार, मुद्रा युद्ध चलिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष, परोक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमै परेको छ । त्यसमा पनि डलरको मूल्य बढिराखेको छ । योबीच भारतमा पनि राजस्व घटेको छ । यी सबैको असर हो । यो असर तत्कालीनभन्दा पनि अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने हो कि भन्ने हो र दीर्घकालीन भयो भने त्यसले नेपालमा बहुआयामिक हिसाबले नै प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।
समग्रमा सबै आयामबाट हेर्दा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । भारतीय पर्यटक कम आउन सक्छन् । भारतमा जाने नेपालीको रोजगारी खोसिन सक्छ । यसबाट जोगिने भनेको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नै हो ।